I-Vitamin D vs. D3: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Septhemba 2021
Izindaba, Wellness Izindaba Inkampani Inkampani, The Checkout Izilwane Ezifuywayo Umphakathi, Inkampani Cindezela Inkampani, Izindaba Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izindaba Umphakathi Imininingwane Yezidakamizwa Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Vitamin D vs. D3: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
I-Vitamin D vs. D3: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
umuthi wokukhwehlela ongcono kunabantu abadala bekhawunta
Amavithamini ka-D ngamavithamini ancibilika anamafutha adlala indima ebalulekile ekumunweni kwe-calcium nasempilweni yamathambo, kanye nokusebenza komzimba. Isikhumba sethu sikhiqiza uvithamini D lapho sivezwa yilanga, kepha ngenxa yomdlavuza wesikhumba, abantu abaningi bayakugwema ukuthamela ilanga noma basebenzise i-sunscreen, evimbela umzimba ekukhiqizeni uvithamini D. Izinhlobo eziningi zobisi nemikhiqizo yobisi, kanye nejusi le-orange, futhi iqiniswe ngovithamini D. Noma kunjalo, iningi lethu alitholi uvithamini D owanele futhi lidinga ukuthatha ibhekwa. Kunezinhlobo ezimbili zamavithamini D zokudla: i-vitamin D2 (ergocalciferol) novithamini D3 (cholecalciferol), futhi kubalulekile ukuqonda umehluko wabo lapho ukhetha ukuthi iyiphi ivithamini D ezokwengeza.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kukavithamini D no-D3?
Igama u-vitamin D luwuhlobo olungelona igama ngoba ngeke uthole lutho olubhalwe nje ngokuthi uvithamini D endaweni evithamini ekhemisi. Esikhundleni salokho, ukukhetha kwakho kuzoba ngu-vitamin D2 (Uyini uvithamini D2?) Noma uvithamini D3 (Yini uvithamini D3?). Ngokuvamile, lapho umuntu ekhuluma ngovithamini D, ukukhetha okushiwo yi-vitamin D2. Ngenhloso yalesi sihloko, lapho kukhulunywa ngovithamini D, kuzobhekiswa ku-vitamin D2. Amagama angadida, ngoba kaningi, iziguli zingena ekhemisi zifuna uvithamini D futhi ziyamangala ukuthi kukhona i-D2 ne-D3.
IVitamin D (D2) ivela emithonjeni yezitshalo, njengamakhowe asendle, kanye nokudla okuqinisiwe, njengobisi noma imikhiqizo yokusanhlamvu. Amandla ayo ngokuvamile alinganiswa ngamayunithi aphesheya, afushaniswa njenge-IU ekubhaleni. Ama-capsule we-IU ayi-50,000 ayimithi kadokotela kuphela, kanti amandla aphansi atholakala ngaphezu kwekhawunta. IVitamin D ibiza kancane ukukhiqiza ngakho-ke iyifomu elitholakala kakhulu kwimikhiqizo yokudla enezivikelo eziqinile.
I-Vitamin D3 ikakhulu ivela emithonjeni yezilwane efana no-oyili wezinhlanzi, inhlanzi enamafutha, isibindi, namaqanda amaqanda. Lapho isikhumba sakho sichanyiswa yilanga, sikhiqiza uvithamini D3. Ngenxa yalesi sizathu, kwesinye isikhathi kubizwa ngokuthi i-vitamin yelanga. Amandla ayo nawo alinganiswa ngamayunithi aphesheya. Zonke izinhlobo zikavithamini D3 zitholakala ngaphandle kwe-counter.
Umehluko omkhulu phakathi kukavithamini D no-D3
Uvithamini D2 Uvithamini D3
Isigaba sezidakamizwa Uvithamini D Analog Uvithamini D Analog
Ngubani igama lomkhiqizo? Ergocalciferol noma uvithamini D2
UDrisdol, uCalcidol, uCalciferol I-Cholecalciferol, i-vitamin D, noma i-vitamin D3
I-Decara, i-Dialyvite D3 Max
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? Amaphilisi omlomo namaphilisi, isisombululo soketshezi lomlomo Amaphilisi omlomo namaphilisi, isixazululo soketshezi lomlomo, isisombululo samanzi esingaphansi
Uyini umthamo ojwayelekile? I-1,000 IU kuya ku-2,000 IU nsuku zonke yokwengeza i-vitamin D I-1,000 IU kuya ku-2,000 IU nsuku zonke yokwengeza i-vitamin D
Yelashwa isikhathi esingakanani? Akupheli Akupheli
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Izinsana, izingane, intsha kanye nabantu abadala Izinsana, izingane, intsha kanye nabantu abadala
Izimo eziphathwe ngu-vitamin D no-D3
I-Vitamin D2 njengomuthi kadokotela isetshenziselwa ukwelapha i-hypoparathyroidism (ukuncipha kwe-thyroid secretion), ama-rickets amelana novithamini D, kanye ne-hypophosphatemia (amazinga aphansi e-phosphorus egazini). Ijwayele ukusetshenziselwa ukunganeli kwevithamini D kukho konke ukwenziwa kwayo kadokotela nangaphezulu. I-FDA ayizamukeli izimangalo zokwelashwa zezithasiselo zamavithamini ezingaphezulu kwekhawunta, ngakho-ke, noma ngabe lokhu kusetshenziswa kuvame kakhulu, kubhekwa njengelebuli engekho.
Zonke izinhlobo zamavithamini D3 zitholakala ngaphandle kwe-counter, ngakho-ke azivunyelwe i-FDA ukwenza izimangalo zokwelashwa. Kodwa-ke, uvithamini D3 uvame ukusetshenziswa ngaphandle kwelebuli ukwelapha i-hypoparathyroidism kanye nokushoda kukavithamini D, kanye nokuvimbela ukukhumuzeka kwamathambo.
Ukusetshenziswa okuhlukahlukene kwe-vitamin D supplementation kubhalwe etafuleni elingezansi. Kufanele njalo ufune iseluleko sezokwelapha ngaphambi kokuqala ukwengezwa kukavithamini D.
Isimo Uvithamini D2 Uvithamini D3
I-Hypoparathyroidism Yebo Ngaphandle kwelebula
Ama-rickets aqondisayo Yebo Ngaphandle kwelebula
I-Hypophosphatemia Yebo Ngaphandle kwelebula
Ukwengezwa kokudla Yebo Yebo
Ukuntuleka / ukushoda kukaVitamin D Ngaphandle kwelebula Ngaphandle kwelebula
Ufuna intengo engcono kuVitamin D?
Bhalisela izexwayiso zentengo kaVitamin D bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Thola Izaziso Zentengo
Ingabe i-vitamin D noma i-D3 isebenza kangcono?
I-Vitamin D2 ne-D3 zingena egazini lapho zigaywa khona yisibindi zibe yi-25-hydroxyvitamin D2 ne-25-hydroxyvitamin D3, kungenjalo ngokuhlanganyela eyaziwa ngokuthi yi-25D noma i-calcifediol. ICalcifediol iyinkimbinkimbi kavithamini D ejikeleza egazini lakho, futhi amazinga ayo akhombisa ngqo izitolo zomzimba wakho zikavithamini D. ICalcifediol ibizwa kakhulu ngokuthi ifomu elisebenzayo likavithamini D. Lapho udokotela wakho eyalela ukuhlolwa kwelebhu ukuhlola amazinga akho kavithamini D, ulinganisa amazinga akho e-calcifediol (25D).
Kube nezifundo eziningana eziqhathanisa ukuthi ngabe ukwengeza nge-vitamin D2 noma i-D3 kukhiqiza izinga eliphakeme legazi le-calcifediol. A funda eshicilelwe yiNational Institutes of Health yenziwa kwabesifazane asebekhulile, abangemva kokuya esikhathini nokuya esikhathini ababekhonjwe njengabantulayo ku-vitamin D. Kuqhathanise imiphumela yokuthola umthamo owodwa ophakeme kavithamini D2 noma uvithamini D3 emazingeni e-calcifediol. Ucwaningo luphethe ngokuthi i-vitamin D3 ikhiqize cishe inani eliphindwe kabili le-calcifediol ejikelezayo kulesi siguli ngokuqhathaniswa ne-vitamin D2.
Ngokuhlukile isilingo somtholampilo ngokuqhathanisa uhlobo lwemaviki ayi-10 lokuphindwa kabili kwamaviki angama-50 000 IU kavithamini D2 novithamini D3 emaqenjini afanelana ngokwenani labantu, ivithamini D3 nayo yatholakala iphakeme ekukhiqizeni amazinga aphezulu we-25D, noma i-calcifediol.
Ngokuya ngezivivinyo zelebhu ezilinganisa amazinga kavithamini D, udokotela wakho angahlola inani eliphelele lama-25D noma lamahhala lama-25D, noma womabili. Impikiswano isala lapho ukuhlolwa kwelebhu kuyisilinganiso esihle kakhulu sezitolo zikavithamini D womzimba wakho, kodwa lezi zifundo zikhombisile ukuthi uvithamini D3 ubephakeme ekukhuphuleni womabili amazinga.
Ufuna intengo engcono kuVitamin D3?
Bhalisela izexwayiso zentengo kaVitamin D3 bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Ukuqhathaniswa nokuqhathaniswa kwezindleko zikavithamini D vs. D3
I-Vitamin D2 esefomini kadokotela ivame ukumbozwa yizinhlelo eziningi zomshuwalense wezohwebo kanye neMedicare. Amafomu e-over-the-counter ngokuvamile awahlanganiswa nezinhlelo zomshuwalense wezohwebo noma ze-Medicare. Intengo ingahluka kakhulu ngokuya ngomthamo. Izindleko ezijwayelekile zomthamo we-50,000 IU wamasonto ayishumi nambili wezokwelapha ngu- $ 47.99. Ngesigqebhezana esivela ku-SingleCare, le ntengo yehlela ku- $ 11 ephansi.
UVitamin D3 ungaphezulu kwekhawunta, ngakho-ke imvamisa akahlanganiswa nezinhlelo zomshuwalense. Intengo iyahluka ngokuya ngomthamo. I-D3 ingabiza njengama- $ 40 kepha uma udokotela wakho ekunika umuthi ungayithola ibe ngama- $ 20 aphansi ngesigqebhezana sesaphulelo se-SingleCare.
Ngokuvamile embozwe umshwalense? Yebo, ngomthamo kadokotela Akunjalo
Imbozwe ngokwejwayelekile yi-Medicare Part D? Yebo, ngomthamo kadokotela Akunjalo
Umthamo ojwayelekile 12, 50,000 amaphilisi we-IU 12, 50,000 amaphilisi we-IU
Inkokhelo ejwayelekile yeMedicare Part D < depending on plan n / a
Izindleko ze-SingleCare $ 11- $ 17 $ 20 +
Imiphumela emibi ejwayelekile ye-vitamin D vs. D3
Ayikho imiphumela emibi ejwayelekile ekwelashweni nge-vitamin D2 noma i-D3. Imiphumela engemihle ehlobene novithamini D ingumphumela we-hypervitaminosis D, isimo esingajwayelekile kakhulu esenzeka lapho udla uvithamini omningi ngokweqile. Lokhu kwesinye isikhathi kubonakala kwiziguli ezithatha ama-megadoses kavithamini D, okuholela ku-vitamin D ubuthi. Umphumela ukwakhiwa kwamazinga aphezulu we-calcium egazini angaholela ekucanuzelweni yinhliziyo, ukuhlanza, ukuqunjelwa, nokuchama kaningi. Uma ishiywe ingalashwa, ukwehluleka kwezinso okungenakulungiseka kungenzeka kanye nokubalwa kwezitho nezicubu ezithambile.
Ithebula elilandelayo libala imiphumela emibi ehlobene ne-hypervitaminosis D, hhayi ukwengezelwa okuvamile kwe-vitamin D. Imininingwane engaphezulu ngobuthi bukavithamini D ingatholwa kudokotela wakho noma usokhemisi, ngoba lokhu kungenzeka kungabi uhlu oluphelele.
Isicanucanu Yebo Akuvamile Yebo Akuvamile
Ukuhlanza Yebo Akuvamile Yebo Akuvamile
Ukuqunjelwa Yebo Akuvamile Yebo Akuvamile
I-Polyuria Yebo Akuvamile Yebo Akuvamile
I-Nocturia Yebo Akuvamile Yebo Akuvamile
Ukwehluleka kwezinso Yebo Akuvamile Yebo Akuvamile
Ukubalwa komzimba Yebo Akuvamile Yebo Akuvamile
Ukubalwa kwezicubu ezithambile Yebo Akuvamile Yebo Akuvamile
Ukushoda kwegazi Yebo Akuvamile Yebo Akuvamile
Ukwehla kwesisindo Yebo Akuvamile Yebo Akuvamile
Ukudanjiswa kwamathambo Yebo Akuvamile Yebo Akuvamile
Umthombo: I-DailyMed .
Ukusebenzisana kwezidakamizwa zikavithamini D2 kuqhathaniswa ne-D3
I-Vitamin D2 ne-D3 ngayinye zihlanganiswa nesibindi ziye ku-25D, ngakho-ke ukuhlangana okungenzeka kube khona kwezidakamizwa kuyafana kuwo womabili la mafomu. Uvithamini D ungakhuphula amazinga e-serum e-aluminium lapho ethathwa nge-aluminium hydroxide, i-antacid ejwayelekile, ngakho-ke inhlanganisela kufanele igwenywe. I-Thiazide diuretics, efana ne-hydrochlorothiazide, ingakhuphula amathuba okuthi uvithamini D akhuphule amazinga e-calcium egazini aye ezingeni eliphakeme eliyingozi. Iziguli kuzo zombili i-thiazide diuretics kanye ne-vitamin D supplementation kufanele ziqashwe ngalokhu ngumhlinzeki wazo wezokunakekelwa kwempilo. Eminye imishanguzo inganciphisa ukumuncwa nokusebenza kwevithamini D yakho yokwengeza. Ama-sequestrants e-Bile-acid, njenge-cholestyramine, ayisibonelo somuthi ozophazamisa ukumuncwa kuka-vitamin D. I-Vitamin D ne-cholestyramine akufanele zinikezwe ngasikhathi sinye.
Ithebula elilandelayo kungenzeka lingabi uhlu oluphelele lokuhlangana kwezidakamizwa. Sicela uthintane nosokhemisi noma umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola eminye imininingwane nohlu oluphelele lokuxhumana.
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa Uvithamini D2 Uvithamini D3
Aluminium hydroxide I-Antacid Yebo Yebo
I-Cholestyramine I-sequestrant yeBile-acid Yebo Yebo
IDanazol IHormone Yebo Yebo
Erdafitinib I-FGFR kinase inhibitor Yebo Yebo
Amafutha amaminerali I-Laxative Yebo Yebo
I-Orlistat I-Lipase inhibitor Yebo Yebo
I-Sucralfate Umenzeli wokumboza iMucosal Yebo Yebo
I-Metolazone I-Thiazide isisu Yebo Yebo
Izexwayiso zikavithamini D no-D3
Ubuthi be-Vitamin D bungavela ngemithamo ephezulu ngokweqile. Izimpawu zingafaka isicanucanu, ukuhlanza, ukulahlekelwa isifiso sokudla, ukuqunjelwa, ukungabi namanzi, ukukhathala nokudideka. Ngenxa yokuthi i-vitamin D iyisidakamizwa esincibilika emafutheni, imiphumela yokwelashwa kukavithamini D ingahlala izinyanga ezi-2 noma ngaphezulu ngemuva kokuba ukwelashwa kuyekiwe. Kubalulekile futhi ukwazi okuqukethwe uvithamini D kwezinye izithako ongahle uzithathe, njenge-multivitamin yansuku zonke. Akufanele uthathe imithamo ephezulu yama-vitamin D ngaphandle kokuyalelwa ngudokotela wakho.
Imibuzo ebuzwa njalo ngevithamini D vs. D3
Yini i-vitamin D (D2)?
I-Vitamin D (i-D2 — i-ergocalciferol) iyisengezo sikavithamini D esitholakala kuzo zombili izindlela zokwelashwa nezithengwa ekhawunteni. Itholakala kumathebulethi womlomo nakuma-capsule, kanye nesisombululo somlomo. I-Vitamin D2 ivela emithonjeni yezitshalo futhi iyindlela ejwayelekile kakhulu kavithamini D etholakala ekudleni okuqinisiwe.
Yini i-vitamin D3?
IVitamin D3 (cholecalciferol) i-over-the-counter i-vitamin D ibhekwa etholakala ngamandla ahlukahlukene. Itholakala kumathebulethi womlomo nakuma-capsule, kanye nezixazululo zomlomo nezilimi ezincane.
I-Vitamin D3 ivela emithonjeni yezilwane njengamafutha ezinhlanzi, inhlanzi enamafutha, isibindi noma izikhupha zamaqanda.
Ngabe i-vitamin D noma i-D3 iyafana?
Uma sikhuluma ngovithamini D, sikhuluma ngoVithamini D2. I-Vitamin D2 ne-D3 zombili izithako ezisetshenziswa kakhulu zikavithamini D kodwa azifani. I-Vitamin D2 yi-ergocalciferol futhi ivela emithonjeni esekwe ezitshalweni. I-Vitamin D3 yi-cholecalciferol futhi ivela emithonjeni esekwe ezilwaneni. Kokubili izengezo zicutshungulwa emzimbeni ngesibindi kuya ku-25-hydroxyvitamin D, yize i-vitamin D3 kucatshangwa ukuthi inikela ngamazinga aphezulu we-25D. Okunye ukwakheka kukavithamini D2 kungumuthi kadokotela kuphela, kuyilapho konke ukwakheka kukavithamini D3 kungaphezu kwekhawunda.
Ingabe i-vitamin D noma i-D3 ingcono?
UVitamin D no-D3 bacutshungulwa emzimbeni ngesibindi kuya ku-25-hydroxyvitamin D2 no-25-hydroxyvitamin D3 ngokulandelana. Ucwaningo lukhombisile ukuthi ukuthatha uvithamini D3 kuholela emazingeni aphezulu angama-25D, okuholela ekutheni kube nomnikelo ophakeme ezitolo zikavithamini D womzimba.
Ngingayisebenzisa yini i-vitamin D noma i-D3 ngenkathi ngikhulelwe?
Uvithamini D novithamini D3 kuphephile ukuthatha uma ukhulelwe futhi ubhekwe ngudokotela. Udokotela wakho angancoma umthamo wangezelela wansuku zonke futhi kufanele aqaphe izimpawu zohlobo lwe-vitamin D olungavamile.
Ngingasebenzisa i-vitamin D noma i-D3 ngotshwala?
Uvithamini D novithamini D3 kuphephile ukuthatha uma uphuza utshwala. Zombili lezi zinto zihlanganiswa ngokuyinhloko yisibindi, ngakho-ke ukusebenza kwesibindi kufanele kubhekwe uchwepheshe wezokunakekelwa kwempilo.
Ingabe kufanele ngithathe uvithamini D noma i-D3?
Uvithamini D (D2) novithamini D3 yilezi zithasiselo zevithamini D eziphumelelayo. I-Vitamin D2 ivunyelwe ekwelapheni i-hypoparathyroidism, ama-rickets amelana novithamini D, kanye ne-hypophosphatemia. Zombili izengezo zivame ukusetshenziselwa ukwengezelwa kukavithamini D.
Ucwaningo lukhombisile ukuthi izithasiselo zikavithamini D3 zingaphakama ekukhuliseni izitolo zomzimba zikavithamini D. Kunezinzuzo eziningi zezempilo ekwengezelweni kukavithamini D, kepha udokotela wakho kufanele asebenzise izivivinyo zebhu ukuncoma inani levithamini D okufanele ulithathe nokuthi yiliphi ifomu.
Yini i-vitamin D3 elungele yona?
I-Vitamin D3 isetshenziswa kakhulu njengesengezo sokudla sikavithamini D. Isiza ekumungeni kwe-calcium futhi ingasiza ekuvikeleni i-osteoporosis ne-osteomalacia.
Kungani odokotela bebeka i-vitamin D2 esikhundleni se-D3?
Udokotela wakho anganquma isincomo sakho sikavithamini D ngokususelwa emsebenzini webhu. Phakathi kwabanye abasebenzi bezempilo, kungahle kube nombono wokuthi i-vitamin D2 isebenza kangcono ngoba itholakala ngemithi kadokotela kuphela, yize izifundo zikhombisile ukuthi lokhu akulona iqiniso. UVitamin D2 futhi angaba izindleko eziphansi esigulini, ikakhulukazi uma zimbozwe ngokwengxenye noma zigcwele umshwalense waso.
Ingabe i-vitamin D3 ikunikeza amandla?
Ukwandisa ukudla kukavithamini D kucatshangwa ukuthi kuthuthukisa amandla. A isilingo somtholampilo kwenziwe ukuhlola amazinga okukhathala ezigulini ezakhonjwa njengentula i-vitamin D. Lezi ziguli zanikezwa ukwengezelwa kukavithamini D3 ukukhulisa amazinga egazi kavithamini D, futhi imiphumela ikhombise ukuthuthuka okukhulu emazingeni okukhathala. Ososayensi bakhombisile ukuthi lokhu kungenzeka kungenxa yomphumela kavithamini D ezingeni lamaselula lapho wengeza khona i-mitochondrial oxidative phosphorylation emisipha yamathambo. Lokhu kunciphisa ukukhathala kwemisipha.
Iziteshi ezi-9 ezihamba phambili zokugeza izandla: Umhlahlandlela Womthengi Wakho (2021)
Izingozi zokusebenzisa ama-opioid njengezinsiza zokulala
ungasusa kanjani i-uti ngokushesha ngaphandle kwama-antibiotics
isikhathi esingakanani sokuthatha uhlelo b
kungenzeka yini ukuthuthukisa ukungabekezelelani kwe-lactose kamuva empilweni
Igama lomkhiqizo le-omega 3 acid ethyl esters
indlela yokunakekela ukhunta onyawo
yiliphi izinga likashukela egazini okufanele uye esibhedlela